China Umatshini wokuxuba amanzi kunye nomgubo womvelisi kunye noMthengisi | Qiangzhong
Amanzi kunye nomgubo wokuxuba umatshini
Impompo iqulathe ikakhulu ukondla i-hopper, ivelufa yamabhabhathane, impompo yokufaka i-II, i-impeller, i-shaft ephambili, itywina elinomatshini, ibhatyi yokupholisa amanzi, isihlalo sempompo, isixhobo sokuhambisa ibhanti, iimoto, njl.njl. Zonke iindawo zezixhobo zonxibelelwano ngezixhobo zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu kunye nomhlwa onganyangekiyo ukubola. Xa isixhobo sisebenza, i-motor iqhuba i-shaft ephambili kunye ne-impeller ngebhanti, kwaye i-impeller ijikeleza ngesantya esiphezulu kwimpompo yesibini yokuphumeza injongo yokuxuba ulwelo. I-impeller yenziwe nge-Ocr19N19, ekulula ukuyichitha kwaye uyihlambe, kwaye ithintela iintsholongwane ekuhlanganiseni. Itywina elenziwe ngomatshini lenziwe yiringi emileyo, isangqa esinamandla esineentsimbi, intwasahlobo yentsimbi engenasici kunye netywina lokucinezela. Kukho itywina langaphandle elithintela ukuvuza kolwelo. I-shaft ephambili kunye ne-motor ziqhutywa li-V-bhanti, kwaye impompo ixhotywe ngejacket yokupholisa amanzi kunye ne tensioner Inxalenye yeemoto kunye ne-wiring yale mpompo inokuthintela ukufumba kwamanzi kunye nokufuma, kwaye kumgca ngokhuseleko lombane. I-motor kunye nesiseko sempompo zidityaniswe ziibholithi, ezenza ukuba umatshini uphela ushukunyiswe ngokungxama ngaphandle kwesiseko esimiselweyo sokufaka.
Impompo yomxube ikwabizwa ngokuba ngumxube womgubo wamanzi, umxube wezinto ezingamanzi, impompo yokuxuba izinto ezingamanzi, njl njl. Izixhobo kukuxuba ngokupheleleyo izinto ezingumgubo kunye nolwelo ngesantya esiphezulu esijikelezayo ukuze senze umxube ofunekayo kwaye usithumele. Kwaye iyakwazi ukufunxa izinto ezinobushushu obukhulu obungu-80 degrees. Ingadibanisa ngokukhawuleza izinto ezingamanzi kwaye inokusetyenziselwa ukuveliswa kweencindi zeziqhamo kunye nezinye iziselo ukufezekisa izibonelelo ezifunekayo.
Impompo iqulathe umzimba iphambili kunye impeller, leyo imvelaphi inyuselwa perpendicular omnye komnye. Ifunxa ulwelo kunye nezinyibilikisi ngokwahlukeneyo ngombhobho oneendonga ezibini, ukuthintela ukuba zingangqubeki ngaphambi kokungena kwinxalenye ephambili. Ulwelo lungena emzimbeni ophambili wempompo ngesantya esiphezulu kwaye kwangaxeshanye isithuba siveliswa embindini wetshathi kunye nesitator sokufunxa ukutya okuqinileyo. Ngokuhlengahlengisa ivelufa engezantsi kwehipper, eziqinileyo zinokuphefumla ngokulinganayo. Izixhobo kuyilo oluphambili, imisebenzi emininzi, ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nokuhlala ixesha elide. Iyakwazi ukudibanisa ngokukhawuleza nangokufanayo iindidi eziqinileyo ngaphandle kokunxibelelana nomoya, kwaye izinto zixutywe ngokupheleleyo kwaye ziphinde zenziwe ntsha. Ingasasaza kwaye ibethelele izinto ngexesha elifutshane, inciphise ubungakanani bokuhanjiswa kwamasuntswana, kwaye ekugqibeleni ifumane imveliso entle, yexesha elide.
Egqithileyo Amanzi kunye nomgubo wokuxuba umatshini
Okulandelayo: Ipleyiti yesinyithi engenacici kunye nesakhelo sokucoca ngesigaxa sokuxuba
Impompo emulsification yamanzi kunye ne powder
Amanzi kunye ne powder emulsifier
Umxube wamanzi kunye nomgubo
Impompo yokuxuba amanzi kunye nomgubo
Impompo yokuxuba amanzi kunye nomgubo wokucheba okuphezulu
I-Shear kunye ne-Emulsification Pump SRH-H
Shear ephezulu ye-Emulsifier Type IV